तिमी हतारमा नआउनु | काव्यालय
तिमी हतारमा नआउनु
by रन्जिता चौलागाईं २४ साउन २०७७
जुनेली रात , चिसो बतास अनि “एक प्यारका नग्मा” गीतको भाव ! म कतै हराइसकेकी थिएँ । त्यो विशाल आकाशमा म कतै पखेटा फिँजाएर उडिरहेकी थिएँ । शरीर त यहीँ कतै मुर्ती जस्तो भएर बसिरहेको थियो तर मन भने फुरुङ्ग भएर उडिरहेको थियो । अहिले मेरो मन जति चन्चल त सानासाना नानीहरु पनि नहोलान् । वास्तविकताको दुनियाँलाई एकछिन नदेखे अनि नचिने जस्तो गरेर म आफ्नै कल्पनामा रमाउँदै थिएँ । अझ भनौँ आफैँले अङ्गालेको एकान्तमा म कोही अपरिचितलाई खोज्दै थिएँ ।
मलाइ त्यो काल्पनिक दुनियाँबाट बाहिर निकाल्ने कोशिस गर्दै म्यासेन्जरमा एउटा म्यासेज आउँछ , मलाइ जिस्काउँदै “तिमी कस्तो जीवनसाथी चाहन्छ्यौ?” त्यसपछि म एकछिन आफैँमा सोचमग्न हुन्छु र जवाफ दिन्छु, “मैले चाहेर वा नचाहेर केही चल्दैन, हेरौँ भाग्यले कस्तो जीवनसाथी जुराउँछ “। तर यी सबै त भन्ने कुरा न हुन् । अरुसँग जति कुरा लुकाऊँ आफैँसँग लुकाउन साह्रै गाह्रो पर्ने रहेछ । जति भाग्न खोजुँ कसैको प्रश्नबाट , आफ्नै मन बुझाउन त्यो भन्दा गाह्रो हुने रहेछ । म आफैँसँग झुट बोल्न सक्दिनँ त्यसैले आज तिम्रो सामु केही सत्य राख्ने साहस गर्दै छु । हो तिमी ! मैले नचिन्ने तर मेरै हुन सक्ने , टाढा भएर पनि मभित्रै रहने मेरो “प्रिय अपरिचित” । तिमी जहाँ छौ सकुशल नै छौ होला । मसँगको भविष्यको कल्पनामा तिमीपनि कतै हराउँदै छौ होला । हरेक दु:ख अनि चोटको सामना गर्दै अघि बढ्दै छौ होला । हतारिँदै, सम्हालिँदै आफ्नै छुट्टै संसार बनाउने कोशिसमा छौ होला । तिमी जहाँ जुन अवस्थामा भएपनि म तिम्रो पर्खाइमै रहनेछु । तिमी हतार केही कुरालाई नगर्नु । छिट्टै मेरो सामु आऊ भन्दिनँ म , तिमीलाई चाहिने जति समय लिएर , जिम्मेवारी बोकेर अनि विश्वासयोग्य भएर मात्र आउनु ।
म तिम्रो स्वागतको धुमधामसँगले तयारी गरूँला । दिल त मेरो पनि तोडिएकै होला अनि कहीँ कतै तिम्रो पनि मुटुको अंश खोसिएकै होला । विगत मेरो पनि होला अनि तिमीलाई पनि कसैले छोडेर गएकै होला । प्रिय अपरिचित , यी सबै कुरालाई तिमीले ज्ञानको रुपमा लिनु । जुन धोका तिमीले पाएका थियौ , त्यो मलाई कहिल्यै नदिनु । म मेरा सबै रहस्य खुलेरै तिम्रो सामु राखुँला , विगत बिर्सिने कोशिस गर्दै तिमीसँग भविष्य देखुँला । केही अप्ठ्यारा खुड्किलाहरु आउलान् जिन्दगीमा , म लड्न खोजेजस्तो गरूँला तब तिमी मलाई साहस राखेर हिँड्ने हौसला दिनु , म मुसुक्क हाँसेर तिमीसँगै हिडुँला ।
अनि सुन न ! तिमी जब मेरो जिन्दगीमा आउँछौ असमानताले भरिएको फोहोरको पोको त्यहीँ कतै डस्टबिनमै छोडेर आउनु । अझ सक्छौ भने मेरो लागि समानताको नारा लाउनै नपर्ने वातावरण लिएर आउनु । जति सम्मान म तिमीलाई गर्नेछु त्यति नै सम्मान मेरो लागिपनि राखिदिनु । म सधैँ सही नहुन सक्छु, गलत बाटोतिर नजर घुम्यो भने तिमी अगाडि आइदिनु । मेरो हरेक इच्छा, चाहना पूरा गरिदेऊ भन्दिनँ म तर गन्तव्यसम्म पुग्न मलाइ प्रेरणा दिइरहनु । तिमीलाई हरपल आँखा अगाडि बस भन्दिनँ म तर जानी जानी मेरो आँखा छल्ने काम कहिल्यै नगर्नु । विश्वास तिमीले सोचेभन्दा बढी गरूँला, झुक्किएर पनि तोड्ने कोशिस नगर्नु । कहिलेकाहीँ मनमुटाव होला हामीबीच पनि, रिसाएर टाढा नजानु । अझ सक्छौ भने मसँगै बसेर मेरा कुराहरुलाई तर्क सहित गलत साबित गरिदिनु । तिमी हतार नगरी आउनु तर जब आउँछौ मेरो कारण होइन मेरै लागि आउनु ।
Love Artwork by K Prakash Raman
बाहिरी रुपमा केही राखेको छैन, आत्मा सफा बनाएर आउनु । म छिटो विश्वास गर्न डराउँछु त्यसैले तिमी मेरो अविश्वासको पर्दालाई हटाएरै आउनु । भन्नेहरु त भन्छन् नि मायामा पीडा मात्रै हुन्छ भनेर, यदि त्यो पीडा बिना-धोकाको हुन्छ भने हाँसेरै अंगालुँला। तिमीसँगै बसेर बिग्रिँदै गरेको समाजलाई अनि रित्तिँदै गरेको प्रेमको भण्डारलाई सजाउने ठूलो रहर छ । आज मुना रोमियोसँग अनि मदन जुलियटसँग जिउने मर्ने वाचा गर्दैछन् भन्ने सुनेकी थिएँ, तिमी जब आउँछौ ती सबै कहानीहरु झुटा हुन् कि सत्य हुन् पत्ता लगाएर मात्र आउनु किनकि मलाई जान्नु छ त्यो सबै सच्चाइ अनि बुझ्नु छ आजका प्रेमका सबै परिभाषाहरु ।
मलाई तिमीसँग प्रेमको बन्धनमा बाँधिनु छैन, म त तिम्रो प्रेममा स्वतन्त्र भएर उड्न चाहन्छु । मलाई हसाँउन कहिल्यै नखोज्नु,म स्वयम् तिम्रो प्रेममा रम्न चाहन्छु ।
तिमीलाई थाहा छ? आजभोलि माया रत्नपार्कका पुलहरुमा किन्न पाइन्छ रे अनि ठमेलका गल्लीहरुमा बेच्न । दिल खोलेर माया गर्नेहरु गलत अनि वस्त्र खोलेर माया गर्नेहरु सहि हुन थालेका छन् रे । मायाको गहिराई नापिँदैन तर मोल चाहिँ तोकिन्छ रे । तिमी भन न मलाई, के साँच्चै त्यति सस्तो छ र माया ? अनि त्यति नै सरल छ मायाको हिसाब वा भनौँ प्रेमको व्यापार ? म कहिलेकाहीँ डराउने गर्छु यो सोचेर कि म तिमीलाई विश्वास दिलाउन सकुँला कि नसकुँला प्रेममा व्यापार हुँदैन र व्यापारमा प्रेम चल्दैन । कहीँ कतैबाट मलाई सुन्दै छौ भने मायाको व्यापार गर्नेहरुको भिडमा तिमी साँचो प्रेम उत्पादन गरेर आउनु, मेरी भइन भने अरु कसैकी हुन दिन्न भन्नेहरुको भिडमा तिमी असल प्रेमीको पर्यायवाची बनेर छाउनु । म सबैको सामु तिमीलाई अपनाउने छु, बस् तिमी मेरो साथ कहिल्यै नछोड्नु । मेरो लागि मात्र प्रिय बन भन्दिनँ म, सबैको मनमुटुमा बस्नु । तिम्रो दु:ख अनि सुख सबैको साक्षी हुनेछु म, तिमी हात थामीराख्नु ।
तिम्रो प्रगतिको सदैव कामना गर्नेछु म, उचाईमा पुग्दापुग्दै गगनभित्रै नहराउनु । आश गर्ने बानीले नै मानिसलाई निराश तुल्याउँछ भन्छन् त्यसैले तिमी मेरो आश नभएर सपना हौ । त्यो सपना जुन मलाई जिन्दगीभर देख्नु छ । एकतर्फी त यहाँ केही पनि चल्दैन, मैले बुझेकी छु । तिमी ढुक्क भएर बस्नु, म सधैँ तिम्रै बाटो कुर्नेछु । तिमी पाइला अगाडि बढाउँदै जानु, म तिम्रो सहयात्री बन्नेछु । तिमी प्रगति गर्दै जानु, म तिम्रो हौसला बन्नेछु । मैले तिमीसँग ठूलो सपना देखेकी छु जुन तिम्रो साथ बिना सायदै सम्भव होला । म त रथको एउटा पाङ्ग्रा न हुँ, मलाई धेरै टाढासम्म यात्रा गर्नु छ जसको लागि निडर भएर मेरो गन्तव्यसम्म पुग्ने सहयात्रीको खाँचो छ । जो कोहीसँग कहाँ मिल्छ र सोच ? त्यसैले त मलाई तिम्रै पर्खाइ छ ।
मलाई संसार बदल्नु छैन, समाज सुधार्नु छ । समाजका केही खोक्रा सिद्धान्तहरुको तहसनहस गर्नुछ । छोरी जन्माउने स्त्रीलाई घरबाहिर फ्याक्नेलाई समाज बाहिर निकाल्नुछ । अन्यायको आडमा आफ्नो हेपाह प्रवृत्तिलाई जोगाउँदै आएकालाई न्यायको थप्पड चखाउनु छ । कानुन बेचेर भुँडी फुलाउनेहरुलाई असल शासनको गोली ठोक्न सिकाउनु छ। कति सहनु निर्मला र मुस्कानले पीडा ? मलाई तिनका अपराधीको चिच्याहट सुन्नुछ । मलाई बोल्नुछ ती सबै अत्याचार विरुद्ध जसले मेरो मुटु छियाछिया पारेको छ । मलाई लेख्नुछ ती सबै कहानीहरु जसले गर्दा मेरो निद्रा उडेको छ । एउटाले मात्र बोलेर केही हुन्न भन्नेहरुको भीडमा, “म तिमीसँगै लड्नेछु” भन्नेको खाँचो छ । कोशिस गरेर केही फाइदा छैन भन्नेहरुको भिडमा निडर भएर अघि बढ्नेको खाँचो छ ।
मलाई आकाशको जून र तारा झार्छु भन्ने जीवनसाथी होइन, यही धर्तीलाई पवित्र बनाउँछु भन्ने प्रेमीको खाँचो छ । धेरै आउलान् मायामा रित्तिन्छु, मेटिन्छु भन्नेहरु, मलाई मायामा जिउन सिकाउनेको खाँचो छ । तिमी हतार नगरी आउनु, मलाई तिम्रै पर्खाइ छ । म तिमीलाई जबरजस्ती केही कुरामा गर्ने छैन किनकि म प्रेम चाहन्छु सम्झौता होइन । संसारलाई भुलेर मलाई प्रेम गरपनि भन्दिनँ किनकि यही संसारलाई साक्षी राखेर मलाई तिम्री हुनु छ । म भ्रममा होइन प्रेममा आस्था राख्ने मान्छे, त्यसैले तिमी मेरो लागि हुन सक्दैनौ भने मेरो अगाडि हुने कोशिस कहिल्यै नगर्नु । साथ निभाउन सक्दैनौ भने हातपनि मलाइ नदिनु । सँगै हिँड्ने आँट राख्दैनौ भने नजिक हुनपनि नखोज्नु । मेरा भावनाहरुको सम्मान गर्दै जब मेरो जीवनमा प्रवेश गरेरै छोड्छौ, आफ्ना वाचाहरुबाट अञ्जान कहिल्यै नबन्नु अनि मेरा आशाहरुलाई निराशाको बाढीले नबगाइदिनु । त्यसैले म अझै भन्दै छु, तिमी हतारमा नआउनु ।
Blind Love from Artmajeur